3-da sare: Ciyaaraha gawaarida ee ugufiican Linux | Laga soo bilaabo Linux
Luigys toro | | GNU / Linux, Ciyaaraha
Kobaca Warshadaha Videogame-ka ee Linux waa mid si xawli leh u socda, shirkado badan oo ka tirsan aagga videogame-ka ayaa bilaabay inay maal-gashadaan si ciyaartooda ay sidoo kale ugu raaxaystaan ​​tirada badan ee isticmaaleyaasha ku nool dunida Linux. Si la mid ah, bulshada waxay ku talaabsatay horumaro fara badan abuurista softiweer bilaash ah oo furan, mid ka mid ah doorarka ciyaarta fiidiyowga ee horumarka badan laga sameeyay ayaa ah ciyaaraha gawaarida. Kuwo badan ayaa tixgelinaya in Linux waxaan inta badan ka heli doonaa kuwa caadiga ah ciyaaraha baarkinka, laakiin sidaas maahan, Top 3-da cayaaraha gawaarida ugu fiican ee Linux waxaad la kulmi doontaa ciyaaraha gawaarida ee bixiya waxqabadka ugu sarreeya iyo madadaalo maanta.
VDrift: VDrift waa il furan, ciyaar tartan badan-madal ujeedadeedu tahay isku ekeysiinta wadista gaariga xawaare buuxa. Waxay leedahay mashiinka ciyaarta oo dhameystiran oo ku saleysan Vamos taasoo ka dhigeysa wadista gaariga inuu yahay mid dhab ah. Noocyadii ugu dambeeyay mawduuca muuqaalka ah si weyn ayaa loo hagaajiyay. Vdrift Waxaa loo qaybiyaa hoosta Ruqsadda Guud ee GNU (GPL) v2, taas oo u oggolaaneysa isticmaalka muddada dheer. Waxyaabaha badan ee ciyaarta waxaa ka mid ah:
Jilitaanka jirka ee wadista
Muuqaallo ku saleysan raadadka dhabta ah ee ugu caansan.
Gawaarida loogu talagalay gawaarida dhabta ah.
Tartan u dhexeeya ciyaartoyda
Mouse / joystick / gamepad / giraangiraha / istaago keyboard
Si aad ugu rakibto Vdrift ubuntu iyo disto la mid ah, ku qor kaliya amarrada soo socda kumbuyuutarka:
Inta hartay ee hargabka waxay ka heli kartaa VDrift tan
oo ku raaxee.
Furitaanka Tartanka Gawaarida Furan (TORCS): Mid ka mid ah jilaayaasha tartanka ee aan aadka u jeclaa waa TORCS, waa madal badan, il furan, aad loo qaadi karo, waxay ku socotaa 32 iyo 64 dhisme dhisme ah, waa wax aad u xiiso badan in loo isticmaalo ciyaarta tartanka caadiga ah laakiin way awoodaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu ekeysiiyo baaritaanka gawaarida. Koodhka ilaha TORCS wuxuu ruqsad ka haystaa GPL ("Open Source"). Abuureyaasheeda Eric Espié iyo Christophe Guionneau oo ay weheliyaan barnaamijyo kale oo dhowr ah ayaa ku guuleystey inay TORCS yeelato gawaari kala duwan, raadad iyo qaabab ciyaaro. Intaa waxaa dheer, TORC waxay la jaanqaadi kartaa ku dhowaad dhammaan kontaroolada ciyaarta ee suuqa, marka lagu daro taas, hawlgalka kumbuyuutarka iyo jiirka ayaa aad u fudud.
Cayaartu waxay leedahay muuqaallo waaweyn oo leh laydh dhalaalaya, qiiq, calaamado taayirro iyo saxanno kala jejebiyey. Jiliddu waxay leedahay qaab fudud oo waxyeello iyo shilal isugu jira, waxay leedahay aerodynamic looks (dhulka saameyn, ailerons) iyo astaamo kale. TORCS waxay u oggolaaneysaa qaabab badan oo tartan ah oo ka bilaabma kal-fadhiyo tababar oo fudud illaa horyaallo adag. Waxa kale oo aad ku raaxeysan kartaa la-tartamidda saaxiibbadaada qaab shaashad ah oo ay ku jiraan illaa afar ciyaartoy Kooxda TORCS waxay ka shaqeyneysaa soo saarista habka tartanka internetka. Si aad ugu rakibto 'TORCS' barnaamijka 'Linux distro' waa inaan:
Hubi ah ku tiirsanaanta
Soo qaado koodh isha
Kala fur xirmada adoo adeegsanaya amarka tar xfvj torcs-1.3.6.tar.bz2.
Orod amarrada soo socda:
Tilmaamaha aasaasiga ah ee rakibaadda:
/ usr / maxaliga / bin
/ usr / maxalli / lib / torcs
/ usr / maxalli / wadaag / ciyaaro / torks
Ka orod TORCS qalabka torcs
Xawaaraha Xawaaraha: Ciyaar kale oo aad ku raaxeysan karto Linux waa Speed ​​Dreams, oo ah il furan 3D jilitaanka tartanka jilitaanka oo leh shatiga GPL. Riyada Xawaaraha waxay leedahay dhowr horumar oo xagga muuqaalka ah, saameyn iyo dhaqdhaqaaqyo xasaasi ah, waxay sidoo kale leedahay dareemayaal si loo xaqiijiyo wadista saxda ah.Riyada Xawaaraha ah waxaa lagu ciyaari karaa aalado kala duwan oo wax lagu qoro, oo ay ku jiraan teebabka, jiirka, joornaalada, joystiska, giraangiraha tartanka, iyo baaldaha.
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Riyada Xawaaraha leh:
Hababka ciyaarta ee kala duwan. (Jinsiga, Horyaalnimada, Tababarka, iyo kuwo kale).
Saameynta cimilada iyo waqtiga (Isticmaaluhu wuxuu go'aansan karaa waqtiga iyo cimilada ay rabaan in tartanku dhaco isdhexgalkuna wuxuu la qabsan doonaa qaabeynta la siiyay). Cabbiraadda la sheegay waxay sidoo kale saameyneysaa fiisigiska iyo ku dhejinta gawaarida.
Mashiinno jireed oo kala duwan. (Waxay u oggolaaneysaa fulinta modules lagu soo saaray c ++ oo aad ku dayan karto qaabab kala duwan ee mashiinka gaariga)
Xisaabinta Burbur iyo Shil.
Nidaam maqal oo heer sare ah.
Godka ayaa istaaga
Nidaamka cunaqabateynta darawallada.
Si loo rakibo Xawaaraha Xawaaraha waa inaan fulinno amarrada soo socda
sudo add-apt-kaydinta "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu trusty-getdeb games";
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Top 3: Ciyaaraha gawaarida ugufiican ee Linux
Khayaali ahaan Super Tux Kart ayaa la waayey http://supertuxkart.sourceforge.net/ .
Maqaal wanaagsan laakiin aan la dhigin Super Tux Kart waa dambi, waa hubaal ciyaarta ugu caansan ee Linux.
Jawaab ku siib
linuxer fudud dijo
Waxaan u xiisay Stunt Rally oo leh muuqaallo aad u wanaagsan
Ku jawaab usimplelinuxero
Midda runta ka maqan waa Dood-baxa Daadka, oo ah kan ugu fiican ee xilligan la joogo. Waxa dhacaya waa mid aan furneyn iyo mid bilaash ah. Grid Autosport ayaa iyaduna soo dagaysa in haddii dekeddu fiicantahay (Feral) ay noqon doonto tan ugu fiican mustaqbalka.
Daanyeel N dijo
Xaqiiqdii waa sababtaas in aysan jirin wax ciyaaro ah oo Linux ah, waxay u maleynayaan in dadka isticmaala Linux aysan diyaar u aheyn inay bixiyaan iyaga. Waan ogahay inay jiraan kuwa nadiifiya oo furan halkaan wax walbana waa bilaash, laakiin cayaaruhu waligood iftiin kuma arkin horumarka furan (haddii ay jiraan qaar yar oo reeban), laakiin sidoo kale waxaa jira kuwa halkan jooga oo fahamsan in horumaradaani ay aad qaali u yihiin una baahan yihiin caawimaad shaqo heer sare ah. Fikrad ahaan, waxaan bixin laheyn lacag ciyaar waxaanan leenahay xoriyad aan ku ciyaarno barxad walba.
Jawaab Daniel N
Ciise B dijo
SuperTuxKart kama maqnaan karo liistadan, kaliya maaha tayada iyo balwadda, laakiin sababta oo ah waxay xitaa kuu oggolaaneysaa inaad ku abuurto wareegyo kuu gaar ah iyo karti leh Blender.
Hadaad gujiso xiriirka waxaad arki doontaa astaamaha qaar ee ciyaartan oo inyar yaqaanaan.
Jawaab Ciise B
Rigyada ulaha simulator bilaash ah oo macquul ah par heer sare 😉
Runtii waan jeclaa ciyaaraha, waxaan rajaynayaa inaan helo ciyaaro badan oo sidan oo kale ah.
Jawaab ku bixi Slither.io
Ciyaar fiican laakiin wey fiicnaan laheyd hadii aan kuheli lahaa taleefankayga gacanta
Haye, waxaan isku dayay inaan rakibo VDrift, anigoo qoraya amarrada sida la soo dhigay, laakiin ma shaqeyneyso. Adigoo garaacaya amarka:
wuxuu ii soo celiyaa fariinta soo socota
Lama dari karo PPA: 'ppa: archive.gedeb.net'.
Fadlan hubi in magaca PPA ama qaabkiisu sax yahay.
fadlan hubi boostada
oo halkan waxay ku sharraxeysaa sida loo rakibo:
Sida muuqata waxay kuxirantahay nooca Ubuntu.
METRICS GRIMOIRE Qalabka lagu soo saaro cabbiraadaha software-ka.